Otú Di na Nwunye Ga-esi Na-arịọ Ibe Ha Mgbaghara | Ihe Ndị Ga-enyere Ezinụlọ Aka
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bengali Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Gujarati Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Iban Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kikaonde Kikongo Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Luvale Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Marathi Myanmar Nepali Norwegian Polish Portuguese Punjabi Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tamil Telugu Thai Tigrinya Tok Pisin Tsonga Turkish Twi Ukrainian Umbundu Urdu Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Ka e were ya na gị na di gị ma ọ bụ nwunye gị sere okwu, gị ekwuo n’obi gị na ị gaghị arịọ ya mgbaghara maka na o nweghị ihe i mere ya.
Ka i kwuchara ya, gị agbachi nkịtị. Ma ihe na-ebenụ ka na-ebe. Ọ na-emetụ gị n’obi ka ị rịọ ya mgbaghara, ma ya ana-esiri gị ike.
IHE MERE ỊRỊỌ MGBAGHARA JI ARA AHỤ́
Ịdị mpako. Otu nwoke aha ya bụ Uchendu * kwuru na mgbe ụfọdụ, ịrịọ nwunye ya mgbaghara na-ara ya ahụ́ n’ihi na ịrịọ mgbaghara bụ dimkpa ịkparị onwe ya. Ihe a o kwuru gosiri na ọ na-esiri onye mpako ike ikweta na o nwere ihe o mejọrọ.
Otú mmadụ si ele ya anya. I nwere ike ịna-eche na naanị mgbe i kwesịrị ịrịọ di gị ma ọ bụ nwunye gị mgbaghara bụ mgbe i mejọrọ ya. Otu nwaanyị aha ya bụ Chidimma kwuru na ọ bụ naanị mgbe o doro ya anya na ya mejọrọ di ya ka ya na-arịọ ya mgbaghara. Ma, o kwuru na ọ na-esiri ya ike ịrịọ di ya mgbaghara ma ọ bụrụ na di ya gwara ya okwu ọjọọ, ya agwagwara ya. Ọ sịrị na ya ekwesịghị ịrịọ ya mgbaghara ma ha abụọ mejọọ ibe ha.
Mmadụ nwere ike ịna-eche na ya ekwesịghị ịrịọ di ya ma ọ bụ nwunye ya mgbaghara ma ọ bụrụ na ọ bụghị yanwa chọrọ okwu. Otu nwoke aha ya bụ Ikenna kwuru, sị: “Ọ bụrụ na obi siri gị ike na o nweghị ihe i mere, otú ị ga-esi mee ka di gị ma ọ bụ nwunye gị mara bụ ịjụ ịrịọ ya mgbaghara.
Otú e si zụọ mmadụ. N’ezinụlọ ụfọdụ, ọ na-esiri ụfọdụ ndị ike ịrịọ ibe ha mgbaghara. Ọ bụrụ na i toro n’ụdị ezinụlọ a, o nwere ike ịbụ na ị mụtaghị ịrịọ mgbaghara. N’ihi ya, o nwere ike ịna-esiri gị ike ịrịọ di gị ma ọ bụ nwunye gị mgbaghara ebe ọ bụ na e jighị aka ahụ zụọ gị.
Otú ahụ e si eji mmiri emenyụ ọkụ ka ịrịọ mgbaghara si eme ka obi onye a kpasuru iwe dajụọ
Buru ọdịmma di gị ma ọ bụ nwunye gị n’obi. Ọ bụrụ na o nwere mgbe mmadụ mejọrọ gị, mechaakwa rịọ gị mgbaghara, o doro anya na obi tọrọ gị ụtọ. I nwere ike ime ka obi dị di gị ma ọ bụ nwunye gị ụtọ otú ahụ. Ọ bụrụgodị na i chere na i mejọghị ya, ọ ga-adị mma ka ị rịọ ya mgbaghara ka obi jụrụ ya.—Amaokwu Baịbụl ga-enyere gị aka: Luk 6:31.
Buru ọdịmma ezinụlọ gị n’obi. Mmadụ ịrịọ di ya ma ọ bụ nwunye ya mgbaghara apụtaghị na onye ahụ na-eweda onwe ya ala. Kama, ọ na-eme ka di na nwunye na-ebi n’udo. A sị ka e kwuwe, onye e mejọrọ ya eburu iwe n’obi “karịrị obodo siri ike.” (Ilu 18:19) Ị manụ na di na nwunye na-ebu iwe n’obi, ha agaghị na-ebi n’udo. Ma, ị na-arịọ di gị ma ọ bụ nwunye gị mgbaghara, ụmụ obere ihe agaghị abụrụ unu nsogbu. Ime otú a na-egosi na ọdịmma ezinụlọ gị dị gị mkpa.—Amaokwu Baịbụl ga-enyere gị aka: Ndị Filipaị 2:3.
Na-arịọ mgbaghara n’egbughị oge. Ọ bụ eziokwu na ọ bụrụ na i mejọghị di gị ma ọ bụ nwunye gị, ịrịọ ya mgbaghara nwere ike ịra gị ahụ́, ma ọ pụtaghị na ị ga-eji maka ya ghara ime ihe dị mma. Gbalịa rịọ ya mgbaghara. Cheta na ihe agaghị aka mma ma ị gba nkịtị. Ọ bụrụ na ị na-arịọ ya mgbaghara, yanwa ga na-arịọkwa gị, ọ gaghịkwa na-esiri unu ike ịrịọ ibe unu mgbaghara.—Amaokwu Baịbụl ga-enyere gị aka: Matiu 5:25.
Gosi na o si gị n’obi. Mmadụ ekwesịghị ịnọ ebe ọ na-arịọ di ya ma ọ bụ nwunye ya mgbaghara gosiwe ya otú ihe o mere si dị mma. O kwesịghịkwa ikwu na ya amaghị na obere ihe ahụ o mere ga-ewe ya iwe. O kwesịrị ikweta na ya mejọrọ ya, rịọkwa ya mgbaghara a sịgodị na o chere na ihe ahụ ekwesịghị iwute ya.
Cheta na i zughị okè. Echefula na o nwere mgbe ị ga-emejọ ihe n’ihi na o nweghị onye zuru okè. Ọ bụrụgodị na i chere na o nweghị ihe i mere di gị ma ọ bụ nwunye gị, yanwa nwere ike iche na i mejọrọ ya. Baịbụl kwuru, sị: “Onye bu ụzọ n’okwu ikpe ya bụ onye ezi omume; onye nke ọzọ na-abata ma mee ka a chọpụta ihe bụ́ eziokwu banyere onye ahụ.” (Ilu 18:17) Ọ bụrụ na i cheta na i zughị okè, ọ ga-eme ka ị na-arịọ di gị ma ọ bụ nwunye gị mgbaghara.
^ para. 7 Aha a kpọrọ ụfọdụ ndị n’isiokwu a abụghị ezigbo aha ha.
“Otú unu chọrọ ka ndị mmadụ na-emeso unu, na-emesonụ ha otú ahụ.”—Luk 6:31.
“N’ịdị nwayọọ n’obi na-ewere na ndị ọzọ ka unu.”—Ndị Filipaị 2:3.
‘Na-edozi okwu ọsọ ọsọ.’—Matiu 5:25.
“Ọ bụrụ na di na nwunye ana-arịọ ibe ha mgbaghara, ha ga-enwe ike ịna-edozi ụmụ irighiri ihe ndị gaara aghọrọ ha nnukwu okwu. Ọ bụrụkwa na ha hụrụ ibe ha n’anya, ha ga na-arịọ ibe ha mgbaghara.”
“Di na nwunye ekwesịghị iji oge ha na-arịọ ibe ha mgbaghara kwuwe onye nke mejọrọ ibe ya. Kama, ha kwesịrị iji oge ahụ kpezie. N’ihi ya, ọ bụrụ na o nwere ihe mere ka di gị ma ọ bụ nwunye gị na-ewe iwe, gbaa mbọ ka obi dịghachi ya mma.”
Baịbụl Ọ̀ Ka Bara Uru Taa?—Hụ Ndị Ọzọ n’Anya
E nwere ọtụtụ ebe Baịbụl kwuru gbasara ịhụnanya ma ọ bụghị ụdị nke gbasara ije nwoke na nwaanyị.